Nasekuqiniseni inkonzo-OUZHAN TRADE (Shanghai) CO., LTD
Iinkonzo ze-Ouzhan Precision Preging Precision-China zexabiso eliphantsi zokwenza iiMveliso
Njengombane mveliso wokuphela ogqwesileyo, i-OuZhan inezixhobo ezininzi zokwenza abenzi abanesidanga esikhulu sentsebenziswano. Inxalenye yomgunyathi isoloko ifuna ukwenziwa kubushushu obuphezulu ukwenza into engenanto, emva koko ithunyelwe kumzi-mveliso wethu wokulungiselela ukuqhubekeka kokugqibela. Ke ngoko, njengomvelisi onamandla kunye namava eminyaka kushishino lokulungisa oomatshini, asiqhelananga neenkqubo ezahlukeneyo zokugqibezela, kodwa sikwaqonda kakuhle amakhonkco oveliso kunye neenkqubo zobuchwephesha zeefektri zethu ezisezantsi, oko kukuthi , umenzi weenxalenye zomenzi.
Ke xa ufuna ukwenza iinkonzo, unokujonga ngokuthe ngqo umzi-mveliso owenzayo, kodwa ukhetho olungcono kukufumana umzi-mveliso oqhubayo wokulungisa. Kufuneka uthumele kuphela imveliso yakho kwimizobo, kwaye baya kukunceda rhoqo ekufumaneni iifektri zomgangatho ophezulu, basebenzise iminyaka yabo yamava ukulungiselela zonke iinkqubo zokwenza kunye neenkqubo zakho. Konke okufuneka ukwenze kukulinda ukuhanjiswa kwemveliso egqityiweyo, endaweni yokujonga umzi-mveliso osenzileyo kunye nomzi-mveliso owenzayo, oya kukugcinela ixesha elininzi kunye namandla.
Ukusebenza kwamandla e-Ouzhan Precision
Nokuba yeyiphi na imeko, uhlala usenza owona mgangatho uphezulu kwaye phantsi kwazo naziphi na iimeko ungalalanisi umgangatho wethu yeyona nto ibalulekileyo kwisakhiwo saseOuzhan.
Njengokuba abathengi bethu bengazazi kangako izinto zokuxolelwa, xa sifumana imizobo yoyilo, safumanisa ukuba uyilo alunakwenzeka, kwaye iqela lethu lezobunjineli liza kuzilungisa ngokutsha ezo ndawo ngobuchwephesha bokukhangela. Enye imeko efanelekileyo kukuba abathengi abanakho ukusebenzisa i-CAD ukuzoba iimveliso, kodwa baziprinte ngesandla, ngaphandle kokunyamezelana, kuphela ubukhulu bezinto ezithile. Kule meko, siya kubonelela ngemizobo yobuchwephesha enobuchule bokwenza amanqaku okunyamezelana.
Ukuphuhliswa kwesikhunta, isibini somgangatho ophezulu wokubumba isiseko sokuvelisa umgangatho ophezulu weenxalenye zeenxalenye.Okunye kweenzuzo zethu ezicacileyo kukuba sinesixhobo sethu kwaye sife ivenkile kwaye zonke izinto zokufa zenzelwe kwaye zenziwe ngokwethu.
• Ukuvalwa kokuvalwa okuvaliweyo. Inkqubo ekwakheni iqabane lethu ivaliwe-die ekwenziweni, ngoko ke sizimisele ukuvelisa forgings zentsimbi ezincinane kunye forgings aluminiyam. Sisebenzisa oomatshini bokushicilela ukusuka kwiitoni ezingama-300 ukuya kwiitoni ezingama-2500, sinokubonelela ngee-0.2kg-50kg.
Ngamanye amaxesha, ukuxolela akunakufikelela kwimilinganiselo yokugqibela okanye kunyamezelo lwenxalenye yokugqibela. Kule meko, siya kugcina ukunyamezelana xa usenza, kwaye emva koko senze ukuchaneka kokuchaneka. Umsebenzi wokuqhubekeka uya kubonelela abathengi bethu ngenxalenye ezichanekileyo.
• Ubushushu kunye nonyango lomphezulu. Ukuphucula iipropathi zemveliso, ezinje ngobulukhuni, unyango lobushushu luya kwenziwa emva kokuqiniswa. Inkampani yethu inokubonelela ngenkonzo yokunyanga ubushushu xa iceliwe Sinokubonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo zonyango lomphezulu, ezinje ngokupeyinta, ukwenza galvanizing, njl.
Uvavanyo olungonakalisi. Kwinto nganye yokuxolela, siya kuqhuba uvavanyo olungonakalisi ngaphambi kokuziswa ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
• Inkonzo yokupakisha ngokwezifiso. Sinokubonelela ngeenkonzo zokupakisha ezenziwe ngokwezifiso, kufuneka nje usinike ulwazi olufunekayo lokupakisha.
Kutheni ukhetha iOuzhan nasekuqiniseni Iinkonzo
1. Iminyaka yamava machining
I-Ouzhan ibikhethekile kwi-CNC machining amashumi eminyaka, sikwisimo esihle sokusebenzisana nesityalo esiqinisayo kwaye siqhelene kakhulu neenkqubo ezahlukeneyo kunye neenkqubo zokwenza.
I-Ouzhan igxile ekuguqukeni, ekugayeni, ekugudleni, ekubhoneni, ekujikeni nasekuguqulweni kweenkonzo, ukuze ufumane uninzi lwezinto ezichanekileyo zokuchaneka kweendawo zakho zokwenza izinto kwiqela lethu elithembekileyo.
Sineenjineli ezili-10 kwiziko lethu le-R & D, bonke ngoogqirha okanye oonjingalwazi abasuka kwiDyunivesithi yeSayensi neTekhnoloji yase China. Sinokunikezela ngoyilo lobugcisa kunye neenkonzo zokuchwetheza.
Sinabasebenzi abahlola umgangatho wobungcali kunye nezixhobo, ngokwemigangatho yamanye amazwe kwiimveliso zakho zokuvavanya, kwaye ukhuphe ingxelo yovavanyo eneenkcukacha kumalungu awenzileyo.
Ubungakanani ngentando kunye neemilo ziyafumaneka. Wamkelekile ukwabelana nge-2D yakho okanye i-3D imizobo yeendawo zakho zokwenza nathi, masisebenze kunye ukwenza ubomi bubeyila ngakumbi.
Yintoni inkonzo yokuQinisa kunye nokuSebenza kweMisebenzi
Kwinkqubo yokubumba, isinyithi senziwa ngokucinezela, ukubetha, okanye ukukhupha phantsi koxinzelelo oluphezulu kakhulu ukwenza iindawo ekuthiwa zii-forgings. Phantse nayiphi na isinyithi inokwenziwa, kubandakanya ikhabhoni, iialloys kunye nentsimbi engenasici, ialuminiyam, ititanium, ubhedu, ubhedu, njl. Njl. Isinyithi sigqityiwe ukwenziwa ngaphambi kwenkonzo yokuqinisa, kodwa ayinyibiliki njengakwinkqubo yokuphosa. Kukho iindidi ezahlukeneyo iinkqubo nasekuqiniseni, kuquka nasekuqiniseni ebandayo okanye intloko nasekuqiniseni, die (ivaliwe die) nasekuqiniseni, evulekileyo die nasekuqiniseni ring umsesane ehlelayo nasekuqiniseni. Uhlobo lwenkonzo yokwakha ekhethiweyo luxhomekeke kwisinyithi esiza kwenziwa kunye nemilo, ubungakanani kunye nezinto ezibonakalayo kwimveliso yokugqibela.
Ekubunjweni okubandayo, isinyithi esenziweyo asitshisi ngokuthe ngqo. Endaweni yoko, yenziwa phantsi koxinzelelo oluphezulu kakhulu. Le nkqubo yenza ubungakanani bemveliso buchaneke kwimilo yokugqibela. Ihlala isetyenziselwa ukwenza iindawo ezincinci ezinje ngezinto zokubopha. Nangona amandla afunekayo ekubumbeni isinyithi makhulu kakhulu, kuba akufuneki ukufudumeza, amandla ewonke afunekayo ukwenza izinto usebenzisa le nkqubo mancinci. Amanqaku alungiselelwe ngale ndlela aqinile ngokubanzi kuba ukufudumeza akubenzi buthathaka amandla kunye nokungaguquguquki kwesinyithi.
Impembelelo yokufa kokuqhafaza yeyona nto isetyenziswa kakhulu ekuqiniseni inkonzo. Ekufeni ekwakheni, into eyenziweyo yentsimbi ibekwa phakathi kwesibini eswelekileyo. Njengoko ukungunda kusondela, into yokusebenza iza kungena kwiplastiki de kube icala layo elandisiweyo lichukumise udonga lwecala lokubumba. Kule nkqubo, ngenxa yokuba isinyithi esinyibilikileyo esivela kwindawo yokusebenza sibalekela ngaphandle kwendlela yokubumba, ukukhanya kuyenziwa. Xa ifleshi ipholile, inika umsebenzi wokuchasana nomsebenzi, ngaloo ndlela ukomeleza amandla emveliso yokugqibela. Oku kudala uxinzelelo ngaphakathi kwezona ndawo kwaye kunceda ukuqukuqela kwezinto ziye kungeniswa okungagcwaliswanga.
Kwindawo yokuvula evulekileyo, i-die ayigubungeli ngokupheleleyo umsebenzi. Endaweni yoko, kukho iindawo ezivulekileyo ezivumela yonke imiba yomsebenzi ukuba ihambe isuka ngqo kunxibelelwano olushushu olushushu kunye neendawo ezipholileyo ezivulekileyo. Ngexesha lenkonzo yokuvula evulekileyo, isixhobo sentsimbi shushu ukufudumeza ngaphezulu kobushushu baso sokuphinda sisebenze, emva koko inkqubo iyaqala. Kuyo yonke le nkqubo, umsebenzi ushukunyiswa ukuze yonke imiba yomsebenzi yenziwe. Njengoko i-workpiece ishukuma kwaye ibekwa endaweni kwakhona, iinxalenye kwindawo evulekileyo ziya kuphola ngaphantsi kwenqaku lesinyithi sokuphinda kusetyenziswe kwakhona, kwaye ziphinde ziphinde ziqhubeke njengoko ukuqina kuqhubeka.
Ukuqengqa kweringi kubandakanya ukufudumeza i-billet yentsimbi kubushushu obenziweyo. Isendlalelo emva koko sibekwe kwindawo yokugaya yangaphakathi. Xa uxinzelelo lusetyenziswa kwiindonga ze-calender, i-preform iqala ukuthatha i-cylindrical okanye i-annular shape. Njengokuba ubungakanani bangaphakathi nobangaphandle busanda kwezi nkonzo zomgunyathi, indawo enqamlezileyo iyancipha.
Izixhobo zomgunyathi -Izixhobo ezisetyenziselwa ukwakha
Izinto ezinobunzima azifanelekanga ukwenza. Izinto ezineplastikhi elungileyo kunye nendawo enkulu yeplastikhi kufanelekile ngakumbi ekwakheni, njengekhabhoni yentsimbi, ingxubevange yentsimbi, kunye nezinye izinyithi ezingenantsimbi ezinje ngobhedu, ialuminium, kunye nemagnesium alloys.
Ukugqiba umphezulu we-Ouzhan